ဘက္ထရီဘီး စီးတဲ့လူတွေ သတိ ထားကြပါဗျို့ ဖြစ်လာရင် တကယ် မလွယ်ပါဘူး… – Let Pan Daily
၁၀ မိနစ် ကမ္ဘာ ပျက်ခြင်း
သတင်းထောက် သက်တမ်း တစ်လျှောက် မီးလောင်ပြီဟေ့ ဆို နေမရဘူး. မြေပြင်ကို တမ်းပြေးတဲ့ကောင် နည်းနည်းတော့ လန့်သွားတယ်။ ရပ်ကွက်ကကောင်းလို့ အိမ်ပါ ပြာမကျတာ။
မနက်က မိုးရွာနေတုန်း အားပုအမေ သွားကြို၊ ဈေးထဲ ခဏဝင်ပြီး ပြန်ရောက်တော့ အားသွင်းထားတာ ၃ နာရီကျော်လည်းကျရော ထလောင်ပါလေရော။ လောင်ချက် ပေါက်ထွက်ချက်က တော်တော်ပြင်းတယ်။ မသိရင် ဗုံးကွဲသလားမှတ်ရတယ်။ ဘုန်း ဒိုင်း ဘုန်း ဒိုင်းနဲ့ ။
ဖြစ်ဖြစ်ချင်း အခန်းထဲက ထပြီး ထွက်ဖို့ လုပ်တော့ ငမွှေသီးကောင် အားပုတုက အခန်းကို အပြင်ကနေ သော့ခပ်ထားတော့ ထွက်မရဘူး ၊ အပြင်မှာက လောင်လို့ ပေါက်လို့ အိမ်ခေါင်ပါ မီးတက်စွဲစပြုနေပြီ။ ယောက္ခမနဲ့ အားပုတုနဲ့ သူ့အမေက အော်တာ ငယ်သံပါပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘေးတံခါးပေါ် တက်ခုန်ချ။
အပြင်ရောက်တော့ ရေလောင်းဖို့က လွယ်လင့်တကူ ခပ်စရာ ဘာညာ က ရှာမရ။ ဘေးအိမ်က လူတွေနဲ့ ၄၀ ကား ဆရာတွေက ဝိုင်းငြှိမ်းဖို့ ပြေးလာကြတော့လည်း အပြင်တံခါးက ဂျက်ထိုးထားတော့ အလွယ်တကူဝင်မရ။ အထဲက အသဲအသန်ပြေးဖွင့် ၊ မိန်းပြေးချ ကြုံရာတွေ့ရနဲ့ ရေကောက်လောင်း ၊ ရေလောင်းလေ ထပေါက်လေနဲ့ တော် တော်လုပ်ယူရတယ်။
ကြည့်တော့ သာ ဘက္ထရီအိုးက သိပ်မကြီးတာ။ အထဲမှာ ဓတ်ခဲက အလုံး ၆၀/၇၀ လောက် ပါတယ်။ အကုန်လုံးမလောင်လို့ တော်သေးတာ။ လူမရှိချိန် နဲ့ အကုန်သာ လောင်ရင် မလွယ်ဘူး။ ဒါတောင် ခေါင်မိုး ထုတ်တန်း ကို တက်လောင်လို့မနည်းငြှိမ်းရသေးတယ်။ မိန်းချလိုက်ပေမယ့် လျှော့ဖြစ်ပြီး လျှပ်စီးဝင်နေလို့ လာကူတဲ့အကိုတစ်ယောက် ဓာတ်လိုက်သွားသေးတယ်။ မကြာပေမယ့် ၁၀ မိနစ်လောက်အတွင်း တော်တော်တော့ ပြာယာခတ်သွားကြတယ်။ တစ်အိမ်လုံး မီးခိုးတွေ ပလူပျံအောင်ထွက် ညှော်နံ့က ခုထိမပျောက်သေးဘူး။
ဒါကြောင့် မိုးတွင်းဘက် ဘက္ထရီဘီး စီးတဲ့လူတွေ သတိ ထားကြပါဗျို့။ ပြင်းအား တော်တော်ကြီး ပါတယ်…… ။
Myo Thu AungNyein
ဘက်ထရီဘီး စီးတဲ့လူတှေ သတိ ထားကွပါဗြို့ ဖွဈလာရငျ တကယျ မလှယျပါဘူး…
၁၀ မိနဈ ကမ်ဘာ ပကျြခွငျး
သတငျးထောကျ သကျတမျး တဈလြှောကျ မီးလောငျပွီဟေ့ ဆို နမေရဘူး. မွပွေငျကို တမျးပွေးတဲ့ကောငျ နညျးနညျးတော့ လနျ့သှားတယျ။ ရပျကှကျကကောငျးလို့ အိမျပါ ပွာမကတြာ။
မနကျက မိုးရှာနတေုနျး အားပုအမေ သှားကွို၊ စြေးထဲ ခဏဝငျပွီး ပွနျရောကျတော့ အားသှငျးထားတာ ၃ နာရီကြျောလညျးကရြော ထလောငျပါလရေော။ လောငျခကျြ ပေါကျထှကျခကျြက တျောတျောပွငျးတယျ။ မသိရငျ ဗုံးကှဲသလား မှတျရတယျ။ ဘုနျး ဒိုငျး ဘုနျး ဒိုငျးနဲ့ ။
ဖွဈဖွဈခငျြး အခနျးထဲက ထပွီး ထှကျဖို့ လုပျတော့ ငမှသေီးကောငျ အားပုတုက အခနျးကို အပွငျကနေ သော့ခပျထားတော့ ထှကျမရဘူး ၊ အပွငျမှာက လောငျလို့ ပေါကျလို့ အိမျခေါငျပါ မီးတကျစှဲစပွုနပွေီ။ ယောက်ခမနဲ့ အားပုတုနဲ့ သူ့အမကေ အျောတာ ငယျသံပါပါတယျ။ ဒါနဲ့ ဘေးတံခါးပျေါ တကျခုနျခြ။ အပွငျရောကျတော့ ရလေောငျးဖို့က လှယျလငျ့တကူ ခပျစရာ ဘာညာက ရှာမရ။ ဘေးအိမျက လူတှနေဲ့ ၄၀ ကား ဆရာတှကေ ဝိုငျးငွှိမျးဖို့ ပွေးလာကွတော့လညျး အပွငျတံခါးက ဂကျြထိုးထားတော့ အလှယျတကူဝငျမရ။ အထဲက အသဲအသနျပွေးဖှငျ့ ၊ မိနျးပွေးခြ ကွုံရာတှရေ့နဲ့ ရကေောကျလောငျး ၊ ရလေောငျးလေ ထပေါကျလနေဲ့ တျော တျောလုပျယူရတယျ။
ကွညျ့တော့ သာ ဘက်ထရီအိုးက သိပျမကွီးတာ။ အထဲမှာ ဓတျခဲက အလုံး ၆၀/၇၀ လောကျ ပါတယျ။ အကုနျလုံး မလောငျလို့ တျောသေးတာ။ လူမရှိခြိနျ နဲ့ အကုနျသာ လောငျရငျ မလှယျဘူး။ ဒါတောငျ ခေါငျမိုး ထုတျတနျး ကို တကျလောငျလို့မနညျးငွှိမျးရသေးတယျ။ မိနျးခလြိုကျပမေယျ့ လြှော့ဖွဈပွီး လြှပျစီးဝငျနလေို့ လာကူတဲ့အကိုတဈယောကျ ဓာတျလိုကျသှားသေးတယျ။ မကွာပမေယျ့ ၁၀ မိနဈလောကျအတှငျး တျောတျောတော့ ပွာယာခတျသှားကွတယျ။ တဈအိမျလုံး မီးခိုးတှေ ပလူပြံအောငျထှကျ ညှျောနံ့က ခုထိမပြောကျသေးဘူး။
ဒါကွောငျ့ မိုးတှငျးဘကျ ဘက်ထရီဘီး စီးတဲ့လူတှေ သတိ ထားကွပါဗြို့။ ပွငျးအား တျောတျောကွီး ပါတယျ…… ။
မိဘခြေရာ တောင်းလိုသူများ အတွက် မိဘခြေရာ ခံယူနည်း